PUBG မိုဘိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
PUBG မိုဘိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်
PUBG မိုဘိုင်း APK ကို:
Pubg မိုဘိုင်းဒေါင်းလုပ် Apkpure
Pubg မိုဘိုင်း Apkpure
Pubg မိုဘိုင်း Update ကို
Pubg အခမဲ့ Download
PLAYERUNKNOWN'S စစ်မိုဘိုင်းရရှိသွားတဲ့ – မူရင်းတိုက်ပွဲ Royale ဂိမ်းသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ယခုရရှိနိုင်!
1. မိုဘိုင်းဖုန်းများများအတွက်တရားဝင် PUBG
100 ကစားသမားတစ်ဦးကျွန်း 8 ရက်နေ့ကရြောကျ×8 ကီလိုမီတာကွာအားလုံးဆုရရှိသူတစ်ထိပ်တိုက်တွေ့အနိုင်ရ. ကစားသမားများဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်များနေရာချထားခြင်းနှင့်အနိုင်ယူရမယ်, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ကျုံ့ကစားဧရိယာသို့ကစားသမားတွန်းအားပေးတဲ့အသေးစိတ်နှင့် Tactical ကြွယ်ဝသောစစ်မြေပြင်ပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကစားသမားအနိုင်ယူ. ဆင်းသက်ရန်အဆင်သင့် Get, ပြီးခဲ့သည့်လူကိုရှင်သန်နှင့်ဖြစ်အရာအားလုံးလုယူပြု!
2. အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များနှင့် HD ကိုအသံဖိုင်
အဆိုပါအစွမ်းထက် Unreal Engine ကို4အသေးစိတ်အချက်အလက်အသေးစိတ်နှင့်အတူတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုကယ်တင်တတ်၏, လက်တွေ့ကျကျဂိမ်းသက်ရောက်မှုများနှင့်ကြီးမားသောတိုက်ပွဲ Royale, HD ကဒ်. သငျသညျက high-quality audio ကအတူဆော့ကစားသကဲ့သို့သင်တို့အမှုအရာများ၏ထူနေနဲ့တူခံစားမိ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် 7.1-channel surround sound.
တစ်ခုကအစဉ်အဆက်-ကြီးထွားလာ, သေနတ်၏သေစေနိုင်သောလက်နက်တိုက်, Mele လက်နက်နှင့်လက်တွေ့ကျကျ ballistics နှင့်ဘယ်နေရာတွေမှာနှင့်အတူဘောလုံးပစ်သင်ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းပေးသည်, နှိမ့်ချခေါက်သို့မဟုတ်သင့်ပြိုင်ဘက်ကိုမီးရှို့. Oh, သငျတို့သဒယ်အိုးကြိုက်တယ်? ကျနော်တို့ဒယ်အိုးပြီ
မော်တော်ယာဉ်များအခမဲ့အမျိုးမျိုး, ကားများအပါအဝင်, ကုန်တင်ကား, ဆိုင်ကယ်နှင့်လှေများ, သင်၏ရန်သူတို့ကိုနှိမ့်ချလိုက်ရှာဖို့, ပြဇာတ်ဧရိယာသို့မောင်းသို့မဟုတ်လျင်မြန်စွာပြေးသွားရ.
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတိုက်ပွဲဆက်လက်ရှင်သန်. သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူရေးအဖွဲ့တက်, သင့်ရဲ့စစ်တိုက်အစီအစဉ်စကားသံကိုချက်တင်အတွက်ညှိနှိုင်း, နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောကင်းတပ်ကို set up.
အစွမ်းထက် Anti-cheat ယန္တရားများအားလုံး PUBG MOBILE ကစားသမားများအတွက်ပျော်စရာတရားမျှတတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေး.
မရင့်ဂိမ်းတစ်ခု. အဲဒီတိုက်ပွဲ Royale ရဲ့.
* PUBG MOBILE ရဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုအတွက်အကြံပြုသတ်မှတ်ချက်များ: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် RAM ကိုအနည်းဆုံး 2GB.
လက်ရှိဗားရှင်းထက်ပိုထောကျပံ့ 500 Android ထုတ်ကုန်, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ: ဂလက်ဆီ NOTE8, Sony Xperia XZ1, ဂလက်ဆီ S8 မှာ, Google က PIXEL2, ဂလက်ဆီ NOTE5, Huawei HONOR8, LG က G5, HMIA5A, Huawei P9, Sony Xperia X ကို, Redmi NOTE4.
လက်ရှိ version ကိုကျွန်တော်ရှိပြီးသားအကြောင်းအရာများပိုကောင်းအောင်နှင့် features အသစ်ပေါင်းထည့်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဂိမ်း၏နောက်ဆုံးရညျအသှေးမဟုတျပါဘူး.
သင်ကစားပွဲကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, Facebook ပေါ်မှာဆွေးနွေး join ကျေးဇူးပြုပြီး! PUBG MOBILE တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ: http://www.facebook.com/PUBGMOBILE
မေးခွန်းများသို့မဟုတ်ပူပန်, [email protected] မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ဗားရှင်း: 0.6.0 (8351)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာလ 28, 2018
ဖိုင်အရွယ်အစား: 34 mb
PUBG မိုဘိုင်း .apk Download
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့အားလုံး APK ကိုဖိုင်များကိုမူရင်းနှင့်ပြုပြင်မထားတဲ့များမှာ
တချို့ကအခြားအသုံးဝင်သော APK ကိုဖိုင်များကို Download:
Pokemon TCG ကအွန်လိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Blokada APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
Helix အင်ဂျင် APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Garena အခမဲ့မီးသတ် APK ကိုဒေါင်းလုပ်
bit APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Bitmoji APK ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
PUBG မိုဘိုင်း APK ကိုကဒီမှာ Download လုပ်ပါ
Meitu Apk Download, - အလှအပ Cam, Android အတွက်လွယ်ကူသောဓာတ်ပုံ Editor ကို
အကြှနျုပျ၏ဖွယ်ပြောစကား Angela Download (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး, န့်အသတ်ပိုက်ဆံ) 3.6.2.98 Android အတွက်
စန်းပွသဲသောင်ပြင် .apk ဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Google ကင်မရာ APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Flash Player ကို .apk ဒေါင်းလုပ် – မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ES File ကို Explorer ကို v1.6.1.0 – APK ကို Download လုပ်ပါ
Android အတွက်ပြန်လည် Looney Toons Dash – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Movie, HD APK ဖိုင်ဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
Bobby Movie, ထောင့်ကွက် (အန်းဒရွိုက် Box ကို) APK ကိုဒေါင်းလုပ်…
ထွန်းလင်းအင်အားစုဂန္တဝင် APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
YouTube ကိုဂီတ APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
RWBY: Amity Arena APK Download | အကောင်းဆုံး…